Mianara manamboatra turbin-drivotra tsikelikely | Fanavaozana maintso
Turbinin'ny rivotra an-trano
Azo inoana fa efa naniry hametraka angovo azo havaozina ao an-tranonao ianao ary tsy nanapa-kevitra noho ny vidiny sy ny vidin'ny fampiasam-bola. Ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny fampiasam-bola amin'ny zavatra tsy fantatrao raha hitondra anao ny tombony dia zavatra sarotra zakaina. Na izany aza, eto izahay dia mitondra anao vahaolana amin'ny olanao. Raha tsy afaka mampiasa vola ianao, maninona raha manao angovo azo havaozina ho an'ny tenanao? Amin'ity lahatsoratra ity dia hampianatra anao hananana angovo rivotra ao an-tranonao izahay. Mba hanaovana izany dia ho hitantsika ny fomba fananganana tsikelikely turbine rivotra namboarina.
Te hahafantatra an'io daholo ve ianao? Vakio hatrany raha te hahalala.
1 Manamboara turbin-drivotra namboarina
2 Fitaovana ilaina
3 Manangona ireo propeller
4 Ny fananganana ny turbine rivotra namboarina
Manamboara turbin-drivotra namboarina
Ho an'ireo izay tsy mahalala tsara hoe inona ny turbinin'ny rivotra, dia mpamokatra herinaratra mandeha amin'ny herin'ny rivotra izy io. Izy io dia fitaovana iray izay manana lelany toy ny an'ny mpankafy izay mihetsiketsika noho ny hafainganam-pandehan'ny rivotra mitsoka ka mahavita manova izany Angovo kinetika amin'ny angovo herinaratra hamaly ny fangatahanay.
Araka ny hitanao dia tsy angovo mandoto izany, ka miditra ao amin'ny tontolon'ny fanavaozana sy fampandrosoana maharitra. Amin'izany dia afaka manome anjara birikintsika amin'ny tontolon'ny havaozina isika raha tsy misy ny vidin'ny fampiasam-bola sy ny tsy fandriam-pahalemana voalohany izay manafika ny olona rehetra manandrana mametraka angovo azo havaozina ao an-tranony.
Noho izany rehetra izany, handeha an-tsehatra isika manazava izay ilaina amin'ny fananganana azy.
Ho fananganana ny turbine rivotra namboarinay dia mila fitaovana mahazatra izay hitantsika amin'ny atrikasa iray izahay. Ho fanampin'izany, mila milina arc izahay, izay hampiasainay hanao ny fononteny sy ny vatofantsika vatofantsika ary dremel, izay ampiasaina hanapahana tsara kokoa ny propellers an'ny turbine rivotra an-trano.
Ny iray amin'ireo singa manan-danja izay tsy maintsy ampiasaintsika dia ny alternator. Ny alternatera fiara dia tonga lafatra amin'ny fananganana turbine an'ny rivotra. Ireto misy fitaovana telo lehibe indrindra: ny propeller, ny alternator ary mazava ho azy ny rivotra. Raha tsy misy ny herin'ny rivotra dia tsy hanana karazana angovo elektrika isika.
Ny tena atolotra dia alternator kamio na mitovy amin'izany. Raha atao teny hafa, ny zava-dehibe indrindra dia ny habe. Arakaraka ny maha lehibe ny alternator no tsara kokoa. Satria ny fihodinana tsirairay dia manana fihodinana mampiavaka azy, azontsika atao ny mahalala ny amperage ananany. Toy izao no hitadiavantsika ilay alternator miadana kokoa ary hanampy fampitomboana isika noho ny volombava lehibe hapetrakay eo amin'ny fikosoham-bary ary ilay kely izay hapetrantsika amin'ilay alternator. Amin'ity fomba ity dia hiantohana izahay fa tsy hitsoka mafy ny rivotra ka manomboka mamokatra herinaratra.
Ilaina ny fahalalana tsara ny fanjifana izay hananana ao an-trano sy hikatsahana hiteraka zavatra bebe kokoa amin'ilay antsoina hoe fihinanana poakaty. Izy io dia momba ny Stand by amin'ireo fitaovana marobe izay manana LED, toy ny fahita lavitra.
Eritrereto hoe manangana turbine rivotra isika amin'ny andro iray miaraka amin'ny rivotra kely. Tokony ho hitantsika ny habetsaky ny angovo homen'ny turbin-drivotra antsika amin'ny fitondrana rivotra kely kokoa mba hiantohana ny famatsiana. Tsy afaka manantena ny fihinanana angovo isika amin'izany andro izany raha be rivotra, satria tsy ho fantatsika tsara hoe rahoviana izy ireo.
Manangona ireo propeller
Holazainay ny fomba hanangonana ny singa faharoa manandanja an'ny turbine rivotra namboarinay, ireo mpamadika. Misy karazana turbin-drivotra marobe miaraka amin'ny karazana propeller. Misy ireo izay miasa miaraka amin'ny propeller roa, telo ary hatramin'ny efatra na mihoatra. Miankina tanteraka amin'ny hafainganan'ny rivotra amin'ny faritra onenanay io. Ny alternator ampiasaina dia hamaritra ihany koa ny isan'ny propeller.
Raha mampiasa propellers misy mombamomba ny aerodynamika tsara isika dia afaka manana fampisehoana tsara amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta fa kely kosa ny tohika fanombohana. Midika izany fa tsy ho azontsika atao ny manararaotra ny herinaratra omen'ny rivotra malemy kokoa. Ny tsy maintsy raisintsika ao an-tsaina dia hoe, raha kely kokoa ny fitondran'ny rivotra any amin'ny faritra misy anao, dia mila mpivezivezy bebe kokoa handoa izany.
Manamboatra ny propeller, dia hanararaotra ny fantsona PVC ampiasaina amin'ny fantson-drano isika. Tena lafo izy ireo, be dia be, ary ny kojakoja fanampiny dia azo atao amin'ny fotoana rehetra. Tombony lehibe iray amin'ireny fantsona ireny satria efa miolakolaka izy ireo, ka tsy hisy ny fahasarotana hahatonga ireo propellers. Rehefa manapaka, tsara kokoa ny mampiasa ny laharana fanapahana Dremel sy PVC ho an'ny marimarina kokoa rehefa manapaka.
Ankehitriny dia mila misafidy ireo fitaovana ho an'ny takelaka propeller isika. Ny zavatra tsara hanombohana azy dia ny takelaka hazo boribory izay hanodikodinay ireo propeller. Amin'izany no ahafahantsika manova ny famolavolana ny turbine rivotra amin'ny fotoana rehetra amin'ny fanesorana sy fametrahana ireo propeller ilaina. Raha vantany vao mazava momba ny volavola tianao ho tratrarina dia azonao atao ny mividy azy amin'ny alimina aluminium mba hampifandray ny fehikibo fampitana.
Ny fananganana ny turbine rivotra namboarina
Ny charger bateria mora vidy dia azo ampiasaina hanamboarana ny fifandraisana elektrika. Zava-dehibe ny mividy batery tsara izay hanampy antsika hitahiry angovo betsaka araka izay tratra.
Ny sisa tavela ho antsika dia ny fananganana ny turret izay hametrahana ny turbine rivotra. Ho an'ity dia mampiasa tsato-kazo vy nandrisika izay ampiasaina amin'ny fametrahana antennas izahay. Azonao atao ny mampiasa tady sasany hamehezana azy mba tsy hihetsika izy rehefa misy rivotra mahery. Ireo tariby ampiasaina amin'ny fametrahana azy dia azo apetraka ao anaty fantsona mba tsy hijaly noho ny fikaohon-tany na ho simbain'ny toetr'andro.
Ny fametrahana ity turret ity dia tsy maintsy atao amin'ny base pivoting. Amin'ny alàlan'ny fametahana familiana eo amin'ny rambony dia ho afaka hitodika any amin'ny làlan'ny rivotra tsy misy olana izy ary azo atao ny manana angovo bebe kokoa amin'ilay rivotra iray ihany.
Manantena aho fa miaraka amin'ireto torohevitra ireto dia afaka manangana turbine rivotra an-trano ianao. Safidy tsara foana ny miditra amin'ny tontolon'ny fanavaozana. Ankoatry ny maha angovo ara-toekarena anao dia handray anjara amin'ny fampihenana ny fandotoana sy ny fihenan'ny harena voajanahary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Toekarena an-trano » Turbinin'ny rivotra an-trano
Inona izany, ahoana ny fomba famoronana azy ary inona no fampiasana menaka
Ny jiro jiro sy ny haitao vaovao